फिल्म हेर्दाका १० वैज्ञानिक फाइदाहरु जाने पछि भन्नु हुनेछ, फिल्म हेर्नै पर्छ - उज्यालो पाटो
फिल्म तिन कारणले चल्छ – मनोरञ्जन, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन । एउटा हिन्दी फिल्मको चर्चित भनाईलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा यस्तो हुन्छ । फिल्ममा राखिएको यो संवादका कारण मात्रै होइन, प्राय: मानिसहरु फिल्म हेरेर पाउँनु पर्ने कुरा मनोरञ्जन मात्रै हो भन्ने सोच्छन् ।
र, यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो तर यसको अर्को पाटो पनि हेरौँ । फिल्म हेरेर केवल मनोरञ्जन मात्रै पाइने होइन ।
सामान्यरुपमा हेर्दा पनि फिल्म यस्तो झ्याल हो, जहाँबाट हामी कहिलै नपुगेको अर्कै संसार चियाउँन सक्छौँ । फिल्मले हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ जसलाई हामी केहि क्षण भोगिरहेको अनुभव पनि गर्न सक्छौँ ।
फिल्म यति शक्तिशाली साधन हो जसले हामीलाई हाँसो, रोदन, पिडा सबै छोटो समयमा अनुभव गराउँन सक्छ । फिल्मको यहि शक्ति र विशेषतामा आधारित भएर अहिले मनोचिकित्सकहरुले फिल्म थेरापीको अवधारणा अगाडी बढाइरहेका छन् ।
फिल्म थेरापी यस्तो चिकित्सकिय अवधारणा हो जसमा फिल्ममा हुने संवेदनाहरुको सघनतालाई प्रयोग गर्दै मानिसहरुको मानसिक समस्याको निदान गरिन्छ । यसो भन्दैमा फिल्म थेरापीमा फिल्म देखाइने मात्र होइन । टिभी सिरियल लगायत भनाई तथा उद्दरणहरु, कमेन्ट र स्टाटसहरुलाई पनि अहिले फिल्म थेरापीमा प्रयोग गरिन्छ ।
फिल्म थेरापी केवल मानसिक रोगीहरुको उपचारमा मात्र सहयोगी हुने होइन । फिल्म हेर्नुले सामान्य तथा स्वस्थ मानिसहरुको स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ ।
१. फरक संसारको यात्रा दिमागको ताजापन
फिल्म हेरेको अवधीमा तपाई आफ्नो संसारबाट एकछिन छुट्टिनु हुन्छ । जति कथामा डुब्दै जानुहुन्छ, उति नै तपाई आफ्नो नियमित तथा आकस्मिक समस्याहरुबाट पनि केहि बेर विश्राम लिन पाउँनु हुन्छ ।
यस्तो अलगपनाले दिमागलाई शान्त र ताजा बनाउँछ । दिमागमा स्फुर्ति थपिदिन्छ । यो समयलाई तपाईले आफ्नो शक्ति सञ्चयको समय हो भन्न सक्नुहुन्छ ।
२. आफ्ना नकारात्मक विचारहरुको लेखाजोखा गराउँछ
वास्तविक जीवनमा नायक कि खलनायक छुट्याउँन गाह्रो हुन्छ । कसैका लागि नायक भएका मानिस कसैका लागि खलनायक भएका हुन्छन् तर फिल्ममा नायक र खलनायक छुट्याउँन गाह्रो हुन्न ।
वास्तविक जीवनमा सकेसम्म कोही पनि खलनायक बन्न चाहदैन । खलनायकको अवस्था आफुसँग मिलेमा मानिस हच्किन्छ । आफ्नो विचार र कर्मको लेखाजोखा गर्छ ।
३. यसले तपाईका समस्याहरुमा केन्द्रित हुन सिकाउँछ
तपाईको कुनै पनि कुरामा ध्यान भंग भइरहन्छ भने फिल्म हेरुञ्जेल हुने ध्यानले आफ्नो त्यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ । यस्तै फिल्ममा भएका कुनै पात्रहरुको समस्यामा दर्शकका रुपमा तपाई स्वयमले आफ्ना समस्याहरुसँग तुलना गर्नुहुन्छ । सो पात्रले आफ्नो समस्यालाई कसरी ग्रहण र त्यसको निराकरणका लागि के गर्यो भन्ने कुराले तपाईलाई आफ्नो समस्याहरुमा केन्द्रित हुन सजिलो बनाउँछ ।
४. अवास्तविक घटना तर वास्तविक पाठ
फिल्म हेर्दा तपाईले कुनै पनि वास्तविक पिडा नभोगी अनुभव लिन पाउँनुहुन्छ । त्यो अनुभव दुख वा सुखको मात्र नभएर सफलता वा असफलताको पनि हुन सक्छ । फिल्मको पात्र र घटना तपाईको लागि पाठ हुन सक्छ ।
त्यस्तै केहि कुरा गुमाउँदा देखाइने प्रतिक्रियाको पनि मानक बनाउँछ । जस्तै : असफलता वा सफलता पछाडी पात्रले गर्ने गतिबिधीले तपाईलाई त्यो सहि कि गलत भन्ने छुट्याउँने मौका दिन्छ । जुन तपाईले आफ्नो जीवनका लागि पाठ हुन सक्छ ।
५. सन्देश र आशा
पात्रहरुले बोल्ने संवाद तथा सम्पुर्ण फिल्मको कथाले हामीलाई जीवन उपयोगी सन्देश दिइरहेको हुन्छन् ।
सकारात्मक र मिलनमा गएर सकिने फिल्महरुले तपाईलाई सकारात्मक बनाउँछ । आफु जस्तै भोगिरहेको पात्रले फिल्ममा नै भए पनि सफलता पाए आफ्नो पनि सम्भावना छ भन्ने आशा दिइरहन्छ । तपाईमा निराशा कम हुन्छ र संघर्ष गर्ने शक्ति बढ्छ ।
६. फिल्मले मनको बोझ बगाउँछ
रुनुलाई मनको बोझ बगाउँने पनि भनिन्छ । कति कुराहरुमा हामीले आवश्यक प्रतिक्रिया नदेखाउँदा कुण्ठाका रुपमा मनभित्रै रहेका हुन्छन् । फिल्ममा हुने भावुक दृष्यहरुमा आँशु बगाउँदा तपाईलाई आफ्नो मनको बोझ हटाउँन सहयोग गर्छ ।
फिल्म हेर्दा रुने मानिसहरु रोइ सकिए पछि शान्त, ताजा र सृजनशील भएको अनुभव गर्छन् ।
७. डरसँग परिचय गराउँछ
फिल्मले तपाईको आफ्नो मनभित्रको डरसँग परिचय गराउँछ । तपाईले जब आफु भित्र कुनै वस्तु, पात्र, स्थान वा घटनाबारे डर भएको स्पष्ट अनुभव गर्नुहुन्छ तब त्यो डर निदानका बारेमा काम गर्न पाउँनुहुन्छ । यस्तै पटक पटक आफुलाई डर लाग्ने बिषयसँग फिल्मकै माध्यमबाट भए पनि सम्पर्क भइरहदा त्यो सामान्य हुन थाल्छ ।
८. फिल्मले सिर्जनशील थप्छ
फिल्म खाली पात्रहरुको घटनाक्रम मात्रै होइन । हरेक दृष्य तथा प्रयोग भएका साधनहरुले नयाँ संसार देखाइरहेको हुन्छ । साइन्स फिक्सन फिल्महरुले संसारमा विज्ञान कति चमत्कारिक भइसक्यो वा कति चमत्कारिक हुन सक्छ भन्ने छनक दिन्छन् । त्यस्तै धेरै बिषयवस्तुहरु हुन्छन् जसले हामीलाई त्यसबारेमा जानकारी दिन्छ ।
यस्ता कुराले हामीले देख्ने, सोच्ने र कल्पना गर्ने परिधी फैलाउँछ । हामीलाई सोच्न र सिर्जनशील हुन नयाँ बाटो थपिदिन्छ ।
९. व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो बनाउँछ
पारिवारिक वा साथीभाईसँग फिल्म हेर्न जानु सम्बन्धका लागि मात्रै होइन, दिमागी ताजापनका लागि पनि गजब राम्रो साधन हो । यसले सम्बन्धमा मजबुती थप्छ ।
त्यस्तै फिल्म हेरिसके पछि राम्रो छ भने आफ्ना साथी तथा आफन्तहरुलाई सिफारिस गरिन्छ । त्यस्तै फिल्म हेरेर पछि सो फिल्मका बारेमा कुरा गर्नाले सामाजिक सम्बन्ध बढाउँछ भने सम्बन्धहरुमा पनि आत्मियता थप्छ ।
१०. सोच्ने क्षमता बढाउँछ
फिल्म हेर्दा हरेकको मनमा फिल्मको कथा, संवाद वा दृष्यका बारेमा केहि न केहि कुराहरु आइरहन्छन् । कुन दृष्य कस्तो हुनु पर्थ्यो वा कुन संवाद कस्तो भए झन् मिठो हुन्थ्यो भन्ने कुरा सोच्न सकिन्छ । फिल्मका बारेमा सोचिने यस्ता कुराहरुले तथा टिप्पणीले तपाईको तर्क गर्ने तथा सोच्ने क्षमता वृदि गर्छ ।
फिल्म हेर्न याद गर्नु पर्ने कुराहरु
हरेक फिल्म हरेक मानिसका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हुदैन । तपाईलाई कुन बिषयमा इच्छा छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । आफ्नो रोजाइको बिषयमा भएका फिल्महरु हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका फाइदाहरु पाउँन सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त आफुले हेरिरहने भन्दा फरक किसिमका फिल्महरु समय समयमा हेर्ने गरे नयाँ स्वाद पाउँन सकिन्छ ।